Shan xeer oo loogu talagalay isticmaalka guusha leh ee fumigaants metham
в Agrotechnology, News, Injineerinka / Teknolojiyada
In kasta oo fumigants metamine-sodium metam iyo metam potassium-ay caddeeyeen si aad ah loogu kalsoonaan karo xakamaynta haramaha, cudurrada, iyo nematodes ee beeraha baradhada in ka badan afartan sano, sahankii ugu dambeeyay ayaa xaqiijiyay in ay jiraan dhowr isticmaal oo kale oo alaabta ah. si loo kordhiyo waxtarka.
Xogta cusub ee dhaqdhaqaaqa metames ee ciidda ka dib codsiga waa xoogaa "cusub". Qaar badan ayaa u qaatay in dhaqdhaqaaqa alaabada kor, hoos iyo dhinacba ay labbis ahaan doonaan masaafo 6 ilaa 12 inji ah. Malaha kale ee caadiga ah waxay ahayd in alaabtu ay ku sii jiri doonto ciidda, xakamaynta cayayaanka iyada oo aan loo eegin xaaladaha ciidda.
2017, qoraaga maqaalku wuxuu bilaabay inuu la yaabay waxa ka dhacaya ciidda ka dib codsiga metham, markii dhowr khabiir oo basasha Washington ay bilaabeen inay la yaabaan haddii alaabtu luminayso waxtarka. Ma aysan helin natiijadii laga filayey. Qoraaga maqaalku wuxuu soo iibsaday qalabka sawir-qaadista ee miniRAE (PID) ka dib markii uu ka bartay farsamada cilmi-baarayaasha jaamacadaha waaweyn wuxuuna bilaabay safarro dibadda ah si uu u cabbiro joogitaanka metham ee qoto dheer ciidda kala duwan saacado iyo maalmo ka dib codsiga.
Ka dib saddex sano oo cilmi-baaris ah, ururinta in ka badan 40 oo muunado ciidda ah oo laga qaaday xaalado kala duwan, waxaan helnay shan doorsoomayaal oo waaweyn.
Waxaan ugu yeernaa shanta tiir ee dhaqdhaqaaqa metham ee ciidda. Fikradahan cusub ayaa fure u ah wanaajinta waxtarka isticmaalka metham fumigant ee ciidda.
Ilaali 80% qoyaanka guud ahaan muuqaalka ciidda laga bilaabo 30 maalmood ka hor codsiga iyo ka dib codsiga haddii ay suurtogal tahay. Ciidda qoyan waxay fududaysaa dhaqdhaqaaqa metames-ka, waxay kor u qaadaa neefsiga cayayaanka, waxayna caawisaa ilaalinta alaabta. Marka qoyaanka carradu uu hoos ugu dhaco 50 boqolkiiba kulaylka, dabaysha, ama dhaqdhaqaaqa ciidda xad dhaafka ah awgeed, akhrintu waxay inta badan baaba'aysaa saacado gudahood, ma aha maalmo. Aqoontan, waxaan hadda fahamnay muhiimada muhiimka ah ee qoynta ka hor.
Marka la barbardhigo qiiqa qiiqa kale, cadaadiska uumiga ee alaabada metham aad ayuu u hooseeyaa. Kaliya uma fidaan ilaa iyo si siman sida ay u maleeyeen kuwa isticmaalay sanadihii la soo dhaafay. Tijaabi ciidda si aad si fiican u fahamto meesha saxda ah ee cayayaankaaga. Kadibna si sax ah u dhig badeecadaada metamka ah meel u dhow cayayaanada la beegsanayo adigoo kimijayn, iska siibinaya ama si qoto dheer u siibinaya.
Ha dhayalsan hagaajinta yar ee qalabka aad u isticmaashid si aad ciidda u diyaariso, u mariso alaabta, oo aad u xoojiso codsiga. Waa suurtogal in aad debciso ciidda in yar haddii aadan engegin oo aad ka tagto alaabta korkeeda ama meel u dhow oogada ciidda.
Alaabooyinka Metam ayaa aad waxtar u leh marka abuurka haramaha, cudurada iyo nematodes ay neefsanayaan oo ay koraan ka hor codsiga alaabta. Ciidda aad u engegan waxay saamaysaa neefsiga cayayaanka. Haddii aadan qiyaasi karin in iniinaha haramaha ay dhab ahaantii ku koraan deegaan gaar ah, markaas malaha maya oo aad ayay u adag tahay in la xakameeyo.
Dhaqdhaqaaqa badeecada waxaa laga yaabaa in lagu xaddido ciidda qalalan, cufan ama bowdada ah. Ka fogow inaad alaabta ku marsato dhulka qoto dheer ee barafoobay. Wax kasta oo aad samayn karto si aad uga ilaaliso ciidda inay engegto waa muhiim.
Natiijooyinkayagu waxay muujinayaan in alaabta Metam ay waxtar u leeyihiin sidii hore. Ma jiro wax iska beddelay waxtarka alaabta lafteeda. Laakiin marka isbedel lagu sameeyo hababka codsiga, iyadoo shanta tiir loo isticmaalo hage, horumar la taaban karo ayaa suurtagal ah. Mid kasta oo ka mid ah shanta tiir ayaa arrimo badan ka sii badan, waxaanan hadda haysanaa xogta aan ku soo celinno.
Tags: ilaalinta dhirtametham fumigantsciiddaxeerarka codsiga
ShareShare43Share31Si aad u soo diri
Baradhada RUSSIA 2021. Xafladdii baradhada ayaa dhacday!